घर » अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक समाचार » युएसए ट्राभल समाचार » काकाको एक होनोलुलु फेसनदार छिमेकी: जापानी पर्यटकहरूको लागि सुरक्षित छ?
होनोलुलुमा जापानी वाणिज्य दूतावासले यात्रा चेतावनी जारी गर्दछ। काकाको आफ्नै मा एक नयाँ पर्यटन गन्तव्य हो। यो होनोलुलु, हवाईको अंश हो, वाइकीकीबाट केही मिनेट। हवाई पर्यटकहरु लाई यो नयाँ ट्रेन्डी छरछिमेकमा समय खर्च गर्न कत्तिको सुरक्षित छ?
जापानी आगन्तुकमा क्रूर आक्रमण पछि होनोलुलुमा रहेको जापानी वाणिज्य दूतावासले जापानका पर्यटकहरू काकाकोको अन्वेषण गर्दा सावधान रहन र काकाको बीच पार्कमा बाथरूमको प्रयोग नगर्न चाहन्छ।
यो उही दिन आउँछ होनोलुलु मेजर क्याल्डवेलले मेयरहरूको श्रोतालाई भने चीन मा विश्व बैठक, कती सुरक्षित र रजाई हवाई छ - को कारणले Aloha आत्मा
काकाआको होनोलुलुमा नयाँ हिप पड़ोस हो। प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा ठूलो शपिंग केन्द्रको छेउमा अवस्थित छ, अला मोआना शपिंग सेन्टर, वार्ड शपिंग जिल्ला, र अला मोआना बीच पार्क। यात्रा ब्रोशरले चम्किलो उच्च वृद्धि भवनहरू, फैशनेबल ईटेरीहरू, र विभिन्न भवनहरूको साथ चित्रित बहुविध भित्ते चित्रहरूको यस चल्ती क्षेत्रलाई हाइलाइट गर्दछ।
गत सोमबारको मेमोरियल बिदा जापानी पर्यटकहरूले यो ओहू वरपरको क्षेत्रको आनन्द लिइरहेको लागि दुःस्वप्नमा परिणत भयो। उनीलाई काकाको बिच पार्कको सार्वजनिक बाथरूममा बिहान ११ बजे आक्रमण गरिएको थियो।
होनोलुलु प्रहरीले जापानी पर्यटक पार्क मानिसको बाथरूम भित्र भुइँमा पडीएको पाए। त्यस मान्छेको रगत नाक थियो, निधारमा गहिरो कटौती। उसको दाँत प्रायः बाहिर निस्कियो।
त्यो मान्छेकी पत्नीले उनले हंगामाको आवाज सुनेकी पुलिसलाई भने; उनी आफ्नो पतिलाई जाँच्न गइन्। जब उनी बाथरूममा छिर्छिन्, एक अज्ञात व्यक्तिले उसलाई एउटा चोकहोल्डमा राखिदिए, र उनी बेहोस भइन्।
आक्रमणकर्ताले भाग्नु भन्दा पहिले जोडीबाट केहि पनि लिएन।
ईटीएनले होनोलुलुस्थित जापानी वाणिज्य दूतावासका एक अधिकारीसँग कुरा गर्यो र यस्तो देखिन्छ कि आक्रमणकारी ड्रग्समा थियो। वाणिज्य दूतावासले पनि भन्यो eTurboNews पर्यटन चेतावनी वाणिज्य दूतावास द्वारा मात्र जारी गरिएको थियो। यो जापानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक यात्रा चेतावनी होइन।
Kakaako पनि नयाँ कार्यालय स्थानको लागि हो eTurboNews.